महिनावारीको बेला याैन सम्पर्क गर्दा के हुन्छ ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
महिनावारीको बेला याैन सम्पर्क गर्दा के हुन्छ ?
प्रकाशित मिति ३० चैत्र २०७५, शनिबार १५:२७ लेखक nepali janta
काठमाडौं । धेरै महिला पुरुषहरुमा महिनावारी भएको बेला (सेक्स)यौन सम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारेमा जिज्ञासा रहने गरेको छ । तर यसका बारेमा वैज्ञानिकहरुले भने फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनीहरुले गरेको अधययन अनुसार महिनावारीको बेलामा यौन सम्पर्क गर्न मिल्छ । तर, सुरक्षित सम्पर्कमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । कन्डम लगाएर यौन सम्पर्क गरेमा संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ।
महिनावारीको बेला सम्पर्क गर्दा महिलालाई फाइदा हुन्छ । यस्तो बेलामा सम्भोग गर्दा निस्कने हर्मोनले महिनावारीको दुखाइ कम गर्छ । धेरै महिलाले अरू बेलाभन्दा महिनावारी भएको बेला सम्पर्क गर्दा बढी आनन्द लिने गर्छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि असुरक्षित सम्पर्क गरेमा यौन रोग लाग्ने मात्र होइन, गर्भवती हुनसक्ने खतरा समेत रहन्छ । त्यसकारणले महिनावारीको बेला ध्यान नदिँदा पछि दुःख पाइन्छ ।
महिनावारी सुरु हुँदा, प्रोजेस्ट्रोन भन्ने होर्मोनेले गर्दा पाठेघरमा कन्ट्रयाक्सन सुरु गराउँछ जसले गर्दा पाठेघरबाट रगतसहित अरु पदार्थहरू महिनावारीको रूपमा बाहिर निस्कछ ।
नेताले यौन शोषण गरेको भन्दै संसदको गेटमै हारगुहार – जनकपुरधाम
जनकपुरधाम । सोमबार प्रदेशसभा बैठक सकाएपछि प्रदेश सांसदहरु बाहिर निस्कँदै थिए । त्यो भीडमा राजपा महामन्त्री मनिष सुमन पनि…
खानेपानीसम्बन्धी कडा कानुन, पानीले स्वास्थ्य बिग्रिए क्षतिपूर्ति
काठमाडौं । सरकारले उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त पानी उपलब्ध गराउनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेर खानेपानीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने तयारी थालेको छ।
कहाँ पुग्यो प्रधानमन्त्री ओलीको ‘थिंक ट्यांक’ ?
काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी विषयगत ‘थिंक ट्यांक’ राख्ने तयारी अघि बढाएको छ । विभिन्न निकायअन्तर्गत रहेका…
काठमाडाैं । राजधानीकै सडकमा ठाउँठाउँमा भएका खाल्डाबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने सम्बन्धीत कार्यलयका प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा…
एसईई परीक्षा रद्द भएपछि प्रदेश २ तनावग्रस्त
काठमाडाैं । प्रदेश २ मा शुक्रबार हुने सामाजिक विषयको परीक्षा रद्द भएपछि विद्यार्थीहरु सडकमा उत्रिएका छन् । विद्यार्थीको प्रदर्शन…
सुरक्षा संयन्त्रको विश्लेषणः कमजोर बन्दै विप्लव समूह
काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सुरक्षा संयन्त्रले कमजोर बन्दै गरेको विश्लेषण गरेको छ ।